တစ်စိတ်လောက်ခင်ဗျ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » တစ်စိတ်လောက်ခင်ဗျ
Posted by လပ်ဘာရီး on Jun 29, 2013 in Buddhism, Creative Writing | 12 comments
ဘာစောင့်ဥပဒေထဲ ဘာတွေပါမယ်..ဘယ်လိုရှိတယ် ဆိုတာ အတိအလင်း သိကြပြီး
ဟိုစာရေးဆရာက ဟိုမဂ္ဂဇင်းထဲ ဘာတွေ ရေးထည့်ဆော်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ဂဃနဏ ကော သိကြလို့ လား
အန်..N..? ( ကျုပ်လဲ သိဘူး..မသိလို့မသိသလို မေးနေတာ )
ဟိုမှာကြည့်လဲ ဒီဘုန်းကြီး ဝေဘန်..( အပြစ်တင်)
ဒီမှာလဲ ဝေဖန်နဲ့ 
နောက်ဆုံး ဘာသာတစ်ခုလုံးကိုတောင် Terror လို့ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ဖဲ့ထားတာတောင် ခင်ဗျားတို့ က လေပင့်ပေးနေကြတယ်..ဟုတ်စ..
ကျုပ်တို့ခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်တယ်..
အသားထဲက လောက်ထွက်..နားဖာကလော်ခွက်လောက်မှ ဇောက်မနက်တဲ့လူတွေ
လူမျိုးနဲ့ ဘာသာမပြုတ်ရေးအတွက် ကိုယ်စွမ်းသလောက် ကြိုးပမ်းနေရာက စေတနာ မတော်တဆ လွဲချော်သွားပါကလား..( ဂလားဟုဖတ်ပါ ) ဂလားလို့မသတ်မှတ်ပေးပဲ..ကိုယ်လဲ ဘာမှ မစွမ်းဆောင်နိုင်ပေးပဲနဲ့ 
ထစ်ခနဲ ရှိတာနဲ့အီးပေါက်ဖို့့ပဲ သိမနေကြနဲ့ ..
စေတနာအမှားကို နားလည်ပေးပြီး ဘာသာနဲ့လူမျိုးအတွက် အဖတ်ဆယ်နိုင်အောင် ဆင်းစားကြအုန်း..
မျိုးစောင့် ဥပဒေက အတည်ပြုပြီး တစ်ဂယ်ကော လွှတ်တော်ကို တင်ပြီးပြီမိုလို့ခင်ဗျားတို့အ၀ှာပြုချင်တဲ့လူနဲ့မပြုရမှာစိုးနေကြတလား..
ဒီဘုန်းကြီးတရားတွေကြောင့် အကြမ်းဖက်ကုန်ကြတယ်ထင်ရအောင် ဘုန်းကြီးတရားက အရင်ထွက်တာလား..အဓိကရုဏ်းက အရင်ဖြစ်တာလား…
အန်..ခင်ဗျားတို့့ မသိကြဘူးလား.. ( ကျုပ်လဲ မသိဘူးလို့hehe )
ဘာသာ သာသနာ အကျိုး..ခင်ဗျားတို့ ကျုပ်တို့အကျိုးတွက်ဆို ဘာကိုမှ ပဓာနမထားပဲ တစ်ကယ်ဇ ရှိရှိ (မောင်သန်းရွှေတောင် သောက်ဂရုမစိုက်ပဲ) အထုအထောင်းခံပြီး စည်းစည်းလုံးလုံး ကိုယ်ကျိုးစွန့် ခဲ့တာ ဒီဘုန်းကြီးတွေ
ခင်ဗျားတို့့ ဘကြီးတွေက ပါးစပ်က ဘုရား..ဘုရား လက်က ကားယားကားယားတွေ…
ဘုန်းဘုန်း ဘုရား..ဘုန်းဘုန်းဘုရားဆိုပြီး တစ်ကယ်တမ်းလဲကျကော..အကြမ်းဖက် ၀င်ဆီး ရိုက်နှက် ဖမ်းဆီးတာ
စီးပွားပျက်အောင်လုပ်ရင်တော့ ပလ္လလင်ပေါ်ထားတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေလဲ အချုပ်ခန်းထဲ ထည့်ခံရတာပဲ..
ခင်ဗျားတို့့ ထင်သလို ဘုန်းကြီးတွေ သိပ်ပြီး စိုးမိုးနိုင်လွန်းနေတာမဟုတ်ဘူး..ဘောပေါက်..
ကျုပ်လဲ ဘုန်းကြီးထွက်ထားတာ မကြာသေးဘူး..ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပရယ် လ၀က်လောက်ကမှ ထွက်လာတာ..
သင်္ကြန်တုန်းက အက်စစ်ရန်ကြောက်လို့မလည်ပဲ ဘုန်းကြီး ၀တ်နေတာ..
အဲဒီမဂ္ဂဇင်းတိုက် ဒီမှာ မရှိလို့ 
ရှိရင်တော့ ကျုပ်ကိုယ်တိုင် မီးရှို့ ..အဲ..ဆန္ဒပြ ကန့် ကွက်တယ်
ကျုပ်တို့ ဘုန်းကြီးတွေ Terror မဟုတ်ဘူး..ကျုပ်တို့ ဘာသာ Terror ဟုတ်ဘူး..
တစ်ဘက်ထဲကြည့်ပြီးTerror လုပ်မနေနဲ့့
ကျုပ်တို့ ဘာသာကလဲ ကူညီပေးကမ်းစွန့် ကြဲဖို့ဆုံးမထားတယ်..
ကျုပ်တို့Terror မဟုတ်ဘူး..
မဂ္ဂဇင်း ခေါင်းစဉ်ကို ကန့် ကွက်တယ်..( ဆောင်းပါးတော့ မဖတ်ရသေးလို့သိဘူး)၏
ဒီအချိန်မှာ ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့စော်ဒဂါးတာ ဘာဒဘောလဲ…
အန်… N.. ?
ခင်ဗျားတို့သိကြရဲ့လား..အန် ..Nn ?
ကျုပ်တော့ မသိဘူးလို့ ပေါမို့ .. hal hal
တစ်ကိုယ်တော် ကန့် ကွက်သူ အူကြောင်ကျားငတိ ဂွိဂွိ
Mr. B.E has written 1 post in this Website..
View all posts by လပ်ဘာရီး →
ပထမဆုံး comment ဖြစ်ပြီတွ
ပြောချင် စိတ် မရှိ
ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ.. ဗုဒ္ဓဘာသာထဲ.. လူအနည်းစုပါ..။
ဒီကြားထဲမှာမှ.. မြန်မာပြည်ဟာ.. လူဦးရေစုစုပေါင်းရဲ့.. ၈၉ ရာခိုင်နှုန်းပဲ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လို့.. ဆို(ဆို)တာမို့…
ကမ္ဘာပထမဆုံး.. ဗုဒ္ဓဘာသာအမည်တတ်စစ်တပ်( DKBA)
♩ ♪ ♫ ♬ဘယ်သူမဆို.. ကိုယ်တန်ရာပဲရမယ်..♩ ♬♪ ♫
♩ ♪♬ ♫ တူနယ်♩ ♪ ♫♬ ♩ ♪ ♫ တူနယ်..♩ ♪ ♫ ♩ ♬♪ ♫
စိနပြည်က.. အခုခေတ်မှာ.. ကမ္ဘာ့ဒုတိယအင်အားအကြီးဆုံးနဲ့..
ဂျပန်က… အခုခေတ်မှာ.. ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးတတိယအင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်..
မြန်မာထေရ၀ါဒတွေကတော့.. မဟာယာနတွေကို ကြည့်မရပါဘူး..။
အခုခေတ်.. အစ္စလမ်..ခရစ်ယန်တွေကိုပိတ်ထားတယ်ဆိုတာက.. သူတို့(မဟာယာန)အတွက်..သနားတယ်လောက်ရှိပါတယ်..။
တန်ရာပဲ ရမယ် ဆိုတော့
လူနဲ့ တန်ရာလား ဟင်င်
စနစ်ကြောင့် မဟုတ် လူကြောင့် ဆိုရင်တော့
မတန်တဆကို မရ ရအောင် ယူတဲ့သူတွေကိုရော
ဒါတွေ ချ ပြပြီး
ထေရဝါဒ က အစွန်းဘက်ကို ရောက်နေတယ် ဆိုချင်တာလား
ဒါမှမဟုတ် ဒီဝါဒကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်သူတွေ အစွန်းဘက် ရောက်နေတယ် ပြောချင်တာလား
နည်းနည်းလေး ရှင်းပေးပါလား ဟင်င်
ဒါကိုအနှစ်၁၀၀၀ ပထမမြန်မာနိုင်ငံကစလို့.. အဆက်ဆက်… ပြခဲ့ပြီးပြီ..။
သက်ဦးဆံပိုင်..။ ကိုလိုနီ..။ ကမ္ဘာစစ်ကြီးကာလ..။ ဒီမိုကရေစီ..။ ဆိုရှယ်လစ်..။ ကွန်မြူနစ်..။ ပြည်တွင်းစစ်..။ စစ်အာဏာရှင်…။
ဒါကိုမယုံသေးသမို့.. နောက် ၂နှစ် ၂၀၁၅စောင့်ပြီးမျှော်လင့်နေကြသေး..
ဘယ်စနစ်နဲ့လုပ်လုပ်.. ဘယ်အစိုးရတက်တက်… “ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောတဲ့နိုင်ငံ”ဖြစ်နေမှာပါပဲ..။
မြန်မာဟာ.. ယူအက်စ်စနစ်အောက်(အမေရိကားနေလည်း)ရောက်လည်း.. မြန်မာစရိုက်ပါပဲ..။
ဂျပန်..ဥရောပ.. စိန.. ထိုင်ဝမ်.. ဘယ်စီရောက်ရောက်..ဘယ်မှာနေနေ… မြန်မာကမြန်မာပါပဲ.။
တဦးချင်းစီရဲ့အတွေးအခေါ်ကို လွှမ်းမိုးတာ.. ဘာသာရေးပါ…။
ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ ဖြစ်တည်ရာမူလဘူတ ပြန်ရှာလေ့လာကြည့်ရလ်ိမ့်မယ်..
တောင်ပိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာလို့ခေါ်တဲ့.. ဟိနယာန(ဟိန =နိမ့်သော၊ ယာန =လမ်းကြောင်း) လို့..သမိုင်းကဆိုခဲ့သပေါ့…။( ထုံးစံအတိုင်း.. မြန်မာထေရ၀ါဒစာအုပ်တွေကြားထဲသွားမရှာနဲ့.. အင်္ဂုလိလိုဖတ်)
( မြန်မာက ပိုအစွန်းရောက်ပြီး. ထေရီ(အမျိုးသမီးရဟန်း)ပါဖြုတ်ချခဲ့တယ်..)
ထေရ၀ါဒဆိုတာ. ရဟန်း(သာဝက)တွေရဲ့အဆုံးအမအတွေးအခေါ်ဝါဒပေါ့…။ သူတို့တဆင့်ပြန်ပြောတာ..(စောတကမတက်ရတဲ့) အမှန်ဆိုတာပဲ..။
ဗုဒ္ဓထက်ကျော်ပြီး.. ရဟန်းတွေအဆုံးအမဦးစားပေးရမယ့်ပုံဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ.. ထေရ၀ါဒဆိုတဲ့..ပညတ်အမည်မှာတင်ပေါ်လွင်နေတာ… ဒါကိုကိုးကွယ်ဆည်းကပ်နာယူကြတော့… အခုမြန်မာပြည်ကြီးမြင်ကြရသပေါ့..။
“The end justifies the means” – အဆုံးသတ်ဟာအဆုံးအဖြတ်ရလဒ်…
ဘုရားက သက်သတ်လွတ်စားဖို့မလိုလို့ ပညတ်တယ်.
ထေရာတွေက..ဘုနရားခေါင်းစဉ်အောက်ကနေ.. သက်သတ်လွတ်..။ အမဲသားမစားနဲ့ ဘာညာလုပ်တယ်…။ လူတွေအများစုက လိုက်နာတယ်..။
ထေရာတွေက.. မဟနဖွဲ့.. ဂိုဏ်းဖွဲ့…အကြီးအကဲခန့်.. အုပ်ချုပ်တယ်…။
(သိပ်အထူးအဆန်းမဟုတ်… ပုံစံဆင်ဆင်.. ခရစ်ယန်မှာ(ကက်တလစ်၊ပရိုတက်စတင့်န်).. အစ္စလမ်မှာ(ရှီးယား၊ ဆွန်နီ) ဆိုပြီးရှိပါတယ်..)
မြန်မာတွေသမိုင်းကံကောင်းပြီး.. သိကြားမင်းကျောက်ဖျာတင်းလို့… အိမ်ရှေ့မြောင်းတူးလို့.. ရွှေတွေထွက်စေသတည်း… လုပ်ချလိုက်လို့..မြန်မာတွေချမ်းသာရင်ဘာလုပ်မယ်ထင်ပါသလည်း…
၁) ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်(မွတ်စလင်)ကို စစ်ကြေငြာပါလိမ့်မယ်..
၃) စိနပြည်ရဲ့. အာဏာစက်ရာ တိုင်းရင်းသားတွေကို (စိနဇာတိနွယ်ချေမှုန်းကြ)လုပ်ပြီး… တိုက်ခိုက်ပါလိမ့်မယ်..
၄) ဗုဒ္ဓဂါယာမှာ မြေဧကအကြီးးးးးးးးးးး ကြီးဝယ်ပါလိမ့်မယ်..။
၅) အုပ်ကိုခွာ.. စကျင်ကျောက်ခင်း..။ စကျင်ကျောက်ခွာ.. ရွှေအုပ်ခင်း..
တိုတိုပြောရရင်.. စစ်ကိုခေါ်ပါလိမ့်မယ်…။ ငွေတွေအရင်းအမြစ်တွေ.. (မလိုအပ်တဲ့(ဘုရားမကြိုက်တဲ့)နေရာ)တွေမှာ သုံးပြပါလိမ့်မယ်..။
အပြန်အလှန်လေးစားမှုနဲ့.. ဆရာ/တကာဆက်ဆံတဲ့.. လူမှုစနစ်ကို ပြန်တည်ဆောက်ကြ…။
သူကြီးက MG မှာကျမလေးစားအားကျရတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ ဘာသာရေးအယူအဆကြောင့်ဆိုတာကိုလဲလက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၁၀၀% မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာအခြေချနေထိုင်ကြတာ မြန်မာ ဗုဒ်ဓဘာသာဝင်တွေကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူး။ ကျမ ကသင်ကြားရေးအပိုင်းကိုလဲ နဲနဲစောဒကတက်ချင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျမတို့ နိုင်ငံက closed သိပ်ဖြစ်လွန်းတယ်။ ပြည်ပအားကိုး ပုဆိန်ရိုး တို့။ ပြည့်အင်အားသည်ပြည်တွင်းမှာသာရှိသည်တို့။ မြေကြီးကရွှေသီးတယ်လို့ဆိုတာတွေနဲ့ကြီးပြင်းလာရတာ။ ပြည်ပရောက် မြန်မာတွေ တော်တော်များများ ကလဲ ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်းဆို ပညာသိပ်ပြတတ်ကြတာ။ ပညာရေးမြင့်လာရင်အတွေးအခေါ်တွေမြင့်လာပြီး အရာရာကို ဆန်းစစ်ဝေဖန်ပြီးမှ ယုံကြည်လာကြပါလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်။ ဆရာတပည့်ဆွေးနွေး နိုင်တဲ့ သင်ကြားရေးရယ်။ ကလေးငယ်တွေရဲ့ စိတ်ကူးတွေကိုဘောင်မခတ်တဲ့ ပညာရေးကိုမျှော်လင့်ပါတယ်။ လူငယ်တွေ ကတိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်ပါ။
သူကြီးပဲ အစတုန်းကပြောတော့ “Everyone deserves human right”ဆို။
in democrazia, la gente ottiene ciò che si meritano
ဘာသာတစ်ခုလုံးကို ခေါင်းစဉ်တပ်ထားမှတော့. ဘာသာဝင်အကုန်လုံးနဲ့အလိုလိုဆိုင်သွားမှာပေါ့ဗျာ
ဆိုင်ဆိုင် မဆိုင်ဆိုင် ရော့……http://www.colombopage.com/archive_13A/Jun29_1372523599KA.php
ဒီက အာကိုတွေအမတွေ..ညီတွေ ညမတွေနဲ့့ ဘာမှဆိုင်ပါဘူးခင်ဗျ
အဓိကက မဂ္ဂဇင်းကို လက်မခံဘူးဆိုတာ ထအော်မိတာပါ
Time Magazine, Vol. 182, No. 1, 20 June, 2013 ၏ မျက်နှာဖုံးဆောင်းပါး “The Face of Buddhist Terror” ကို အပြည့်အစုံ ဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ အကြမ်းဖက်မျက်နှာစာ ဤဘာသာသည် ငြိမ်းချမ်းအေးမြခြင်းနှင့် ခန္တီတရားတို့ဖြင့် ထင်ရှားကျော်ကြားသော ဘာသာအယူဝါဒတခုဖြစ်ပေသည်။ သို့ရာတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ အများစုဖြစ်သော အာရှနိုင်ငံအများအပြား၌ ဘုန်းတော်ကြီးများသည် အများအားဖြင့် မူဆလင်များ အပေါ်တွင် တယူသန်အကြမ်းဖက်မှုများကို လှုံ့ဆော်နှိုးဆွပေးလျက် ရှိကြပေသည်။
ဟန်နာ ဘီးခ်ျ – မိတ္ထီလာ၊ မြန်မာ နှင့် ပတ္တနီ၊ ယိုးဒယား။ ၂၀၁၃-ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁-ရက်၊ တနင်္လာနေ့။ ဗုဒ္ဓဘာသာများ ကြမ်းကြလေသော် … ဟန်နာ ဘီးခ်ျ – မိတ္ထီလာ၊ မြန်မာ နှင့် ပတ္တနီ၊ ယိုးဒယား။
၂၀၁၃-ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁-ရက်၊ တနင်္လာနေ့။ “ဗမာ ဘင်လာဒင်” လို့ ဘွဲ့အမည်ခံယူထားပြီး သူ့မျက်နှာက ရုပ်ထုတခုလို တည်ငြိမ်အေးချမ်းလှတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းတော်ဟာ တရား စတင်ဟောကြားပါတယ်။ ရာပေါင်းများစွာသော တရားနာပရိဿတ်က ချွေးတွေ ယိုစီးကျလို့ ကပ်စေးစေးဖြစ်နေတဲ့ ကျောပြင်တွေနဲ့ လက်အုပ်လေးတွေချီရင်း သူ့ရှေ့မှာ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် ငြိမ်ငြိမ်သက်သက် ထိုင်လို့ပါ။ တရားထောက်က ထောက်လိုက်တိုင်း လူအုပ်ကြီးက နီညိုရောင်သင်္ကန်းရုံထားကြတဲ့ ရဟန်းများနဲ့အတူ သာဓု ခေါ်သံ တရားစာရွတ်သံတွေက ရန်ကုန်မြို့ပြီးရင် မြန်မာပြည်ရဲ့ ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ကြီးဖြစ်တဲ့ မန္တလေးက ဘုန်းကြီးကျောင်းတိုက်တတိုက်ရဲ့ ပူလောင်အိုက်စပ်တဲ့လေထုထဲမှာ ပျံ့လွင့်လို့နေပါတယ်။
ကြည့်ရတာကတော့ ငြိမ်းချမ်း အေးမြတဲ့ မြင်ကွင်းပါပဲ … ဒါပေမဲ့ ဦးဝီရသူရဲ့အသံကတော့ အမုန်းတရားတွေနဲ့အက်ကွဲရှတ နေပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ အများစုဖြစ်တဲ့မြေမှာ လူနည်းစု မူဆလင်တွေကို မုန်းတီးရေးတရားတွေကို မိနစ် ၉၀-လောက်ကြာအောင် နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ဟောပြောရင်း “အခု အချိန်ဟာ အေးအေးဆေးဆေးနေကြရမယ့် အချိန်မဟုတ်ဘူး” လို့ သက်တော် ၄၅-နှစ်အရွယ် ရဟန်းတော်က ဖြည်းဖြည်းလေးလေးနဲ့ မိန့်ပါတယ်။ “ခုချိန်ဟာ နိုးထကြရမယ့်အချိန် ခင်ဗျားတို့ရဲ့ သွေးတွေ ဆူပွက်နေရမယ့်အချိန်” ပါတဲ့။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ သွေးတွေဟာ မြန်မာလို့လည်း သိကြတဲ့ ဗမာပြည်မှာ ဆူပွက်နေပြီး မူဆလင်သွေးတွေကလည်း အမြောက်အများ ဖိတ်လျှံကျနေကြပါတယ်။ မနှစ်က တနှစ်လုံး ဗုဒ္ဓဘာသာ လူအုပ်စုကြီးတွေဟာ ဘာသာရေး ယုံကြည်ချက်မတူတဲ့ လူနည်းစုတွေအပေါ် ပစ်မှတ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။ မူဆလင် ဆယ်ဂဏန်းခန့် အသတ်ခံကြရတယ်လို့ အာဏာပိုင်တွေက ဆိုပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေ ကတော့ ရာပေါင်းများစွာ လို့ ခန့်မှန်းကြပါတယ်။ အကြမ်းဖက်မှု အများအပြားဟာ ကုလသမဂ္ဂက ကမ္ဘာ့ အဖိနှိပ်ခံရဆုံး သူတွေထဲက တစုလို့ သုံးနှုန်းတဲ့ ရိုဟင်ဂျာလို့ ခေါ်သူ မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ဖျားက နိုင်ငံမဲ့ မူဆလင် အုပ်စုကြီးအပေါ် ရည်ရွယ်တိုက်ခိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို လူမျိုးစုခြင်း သွေးချောင်းစီးမှုဟာ ဦးဝီရသူ သီတင်းသုံးပြီး ပြင်းထန်ခါးသီးတဲ့ တရားများ ဟောကြားမိန့်မြွက်ရာ မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းကို ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိသွားပါတယ်။ ဒီ အစွန်းရောက်ဘုန်းတော်ကြီး ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ခန့်မှန်းချေ သန်းပေါင်း-၆၀ ခန့်ရှိတဲ့ လူဦးရေရဲ့ ၅% လောက် အနည်းဆုံးရှိမယ့် မူဆလင်များကို နိုင်ငံနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို ခြိမ်းခြောက်နေကြသူများ အဖြစ် ရှုမြင်ပါတယ်။ “[မူဆလင်တွေဟာ] မျိုးပွားတာ သိပ်မြန်ပြီး ကျုပ်တို့ သမီးပျိုတွေကို ခိုးယူနေကြ၊ အဓမ္မပြုကျင့် နေကြတယ်” လို့ ကျနော့်ကို ပြောပါတယ်။ “သူတို့က ကျုပ်တို့ တိုင်းပြည်ကို အပိုင်စီးသိမ်းပိုက်ချင်နေကြတာ၊ ဒါပေမဲ့ ကျုပ်ကတော့ ဒါကို ခွင့်မပြုနိုင်ဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံကို ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံ အဖြစ်ပဲ ကျုပ်တို့ ထိန်းသိမ်းထားရမယ်” … ဒီလို အမုန်းတရားမိန့်ခွန်းမျိုးဟာ သိမ်မွေ့တဲ့ နိုင်ငံရေးဂေဟစံနစ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီး အနည်းဆုံး တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုပေါင်း ၁၃၅-စု ရှိတဲ့ နိုင်ငံ၊ ရာစုနှစ်တဝက်နီးပါးလောက် စစ်တပ် အုပ်ချုပ်ရာကနေ မကြာသေးမီကလေးကတင် လွတ်မြောက်လာရတဲ့ နိုင်ငံတနိုင်ငံကို ခြိမ်းခြောက်နေပါတယ်။ အစိုးရတာဝန်ရှိသူအချို့က ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသမီးတွေ ကလေး နှစ်ယောက်ထက် ပိုမမွေးရ ဆိုတဲ့ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးခေတ်မှာတောင် ကျင့်သုံးခဲလှတဲ့ တားမြစ်မှုမျိုးကို ထုတ်ပြန်ဖို့ ကြိုးစားစည်းရုံးနေပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးတော့ နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းက ခရစ်ယာန်အများအပြား ကလည်း ဗမာစစ်တပ်နဲ့ ခရစ်ယာန်အများစုဖြစ်တဲ့ ကချင်တိုင်းရင်းသားသူပုန်များအကြား မကြာသေးမီက ဖြစ်ပွားတဲ့ တိုက်ခိုက်မှု တွေဟာ ဘာသာရေးခွဲခြားမှုကြောင့် ပိုမိုဆိုးဝါးကုန်တာလို့ ပြောဆိုကြပြန်ပါတယ်။ အစွန်းရောက် ဗုဒ္ဓဝါဒ ဟာ အာရှရဲ့ အခြားဒေသတွေမှာလည်း ရှင်သန် ထွန်းကားနေပါပြီ။ ဒီနှစ်ထဲမှာပဲ သီရိလင်္ကာမှာ အစိုးရပိုင်းက အဆင့်မြင့် ထိပ်သီးတွေနဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသားရေးဝါဒီ အုပ်စုတွေဟာ ထင်ရှားလူသိများလာပြီး မူဆလင်နဲ့ ခရစ်ယာန်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ဖျက်ဆီး ရာမှာ ဘုန်းတော်ကြီးတွေက စီစဉ်ညွန်ကြားမှုတွေကို ထောက်ကူနေကြပါတယ်။ နောက်ပြီး မူဆလင်သောင်းကျန်းမှုကြောင့် ၂၀၀၄-ခုနှစ် ကတည်းကနေ ခုထိ အသက်ပေါင်း ၅၀၀၀-ကျော် ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီ ဖြစ်တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ဘက်စွန်းမှာ ထိုင်းစစ်တပ်ဟာ ပြည်သူ့စစ်တွေကို လေ့ကျင့်ဖွဲ့စည်းပေးထားပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးတွေဟာ ဘာသာရေး ဝိနည်းအရ သူတို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကနေ ဆွမ်းခံကြွဖို့ ထွက်လာကြပြီဆိုရင် မကြာခဏ လိုက်ပါစောင့်ရှောက် ပေးကြ ရပါတယ်။ စစ်သားနဲ့ဘုန်းကြီး အတူရောနှောနေပြီး တချို့ဘုန်းကြီးတွေက ကိုယ်တိုင်လက်နက်ကိုင်ထားတဲ့ မြင်ကွင်းက ထိုင်းနိုင်ငံက မူဆလင်တွေအဖို့ ပိုပြီး သီးခြားတစိမ်းတရံဆန်လာမှုကို တိုးပွားစေပါတယ်။ နိုင်ငံတခုချင်းစီရဲ့ သမိုင်းမှာ အစွန်းရောက်ဗုဒ္ဓဝါဒလမ်းစဉ် သြဇာထွန်းကားလာမှုဟာ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်နယ်နိမိတ်အတွင်းမှာသာ ရှိခဲ့ပေမဲ့ အင်တာနက်အသုံးချမှု တိုးပွားလာတာနဲ့အမျှ Facebook သို့မဟုတ် Tweeter ပို့စ်တခုနဲ့တင် အခြေအမြစ်မဲ့ ဘက်လိုက် မလိုမုန်းထားမှုတွေနဲ့ ကောလာဟလတွေဟာ ချက်ခြင်းဆိုသလို မီးလောင်ရာလေပင့်ပေးလိုက်သလို ဖြစ်သွား ပါတော့တယ်။ အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာ နယ်ခြားတွေကို အလွယ်တကူ ဖြတ်ကျော်ပြီး ပျံ့နှံ့ဖိတ်လျှံသွားနိုင်ပါတယ်။ ဇွန်လထဲမှာပဲ မြန်မာလူမျိုး သိန်းပေါင်းများစွာ လာရောက် အခြေချပြီး အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ မလေးရှားမှာ မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမြောက်အများ အသတ်ခဲ့ခံရပြီး ဒါဟာ မြန်မာပြည်မှာ မူဆလင်တွေ သေဆုံးရတဲ့အတွက် တန်ပြန်ကလဲ့စားချေ လက်တုန့်ပြန်ခြင်းဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်လို့ မလေးရှား အာဏာပိုင် များက ဆိုပါတယ်။
ဘာသာရေးအစွန်းရောက်ဝါဒတွေကို ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဟိန္ဒူအမျိုးသားရေးဝါဒီတွေ၊ မူဆလင် စစ်သွေးကြွတွေ၊ ကျဉ်းမြောင်းတင်းကျပ်တဲ့အယူရှိတဲ့ သမ္မာကျမ်းစွဲ ခရစ်ယာန်ဝါဒီတွေ၊ ရှေးရိုးစွဲ ခရစ်ယာန်အစွန်းရောက် ဂျူးတွေကြားမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကနေ ကင်းလွတ်ကြောင်း ကြိမ်ဖန်များစွာ အစမ်းသပ်ခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀-ကျော်က ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဖြစ်သူ သိဒ္ဓတ္ထဂေါတမ ဖြန့်ချီဟောကြားခဲ့တဲ့ အကြမ်းမဖက်ရေးနဲ့ မေတ္တာ ကရုဏာတရားကို ထင်ဟပ်တဲ့ ဘာသာအဖြစ် ကမ္ဘာတလွှားက နားလည်ထားကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်ဘာသာတရားမဆို ၄င်းတို့ရဲ့ နောက်လိုက်ကျင့်သုံးသူတွေလိုပဲ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ အထွတ်အမြတ် ကိုးကွယ်ရာ သံဃာတွေ ဟာလည်း နိုင်ငံရေး “ပြီး” သူတွေ မဟုတ်ကြဘဲ အခါအခွင့်သင့်ရင် သင့်သလို လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့ မျက်ကန်းမျိုးချစ်ဝါဒရဲ့ ဖျားယောင်းမှုဒဏ်ကိုလည်း ခံနိုင်ရည်မရှိကြပါဘူး။ အာရှဟာ ဗြိတိသျှအင်ပါယာနဲ့ ဖိနှိပ်မှုတွေ အောက်က နိုးထလာတဲ့အခါ အရေအတွက် အများအပြားရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းတော်များဟာ သူတို့ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ရေးရာ ဦးဆောင်မှုနဲ့အတူ ကိုလိုနီဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကို ဦးဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ တချို့ဟာ သူတို့လမ်းစဉ်နဲ့ ယုံကြည်ချက် အတွက် အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီး ကြုံလှီသွားတဲ့ အသားအရည်နဲ့ ငေါထွက်လာတဲ့ နံရိုးအပြိုင်းပြိုင်းဟာ လူဝတ်ကြောင် ဒကာ ဒကာမတွေအတွက် စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုကို အထင်းသား ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ ဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ်တဲ့ တောင်ဗီယက်နမ်အစိုးရကို လွန်ခဲ့တ့ နှစ်ပေါင်း ငါးဆယ်ကျော်က ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြရင်း ပဒုမာသန ထိုင်နည်းနဲ့ ထိုင်လျက် ကနေ မီးလျှံတွေဖုံးလွှမ်းကာ ပျံတော်မူသွားတဲ့ ဗီယက်နမ် ရဟန်းတော် သစ်ခ်ျကွမ်ဒပ်ခ်ရဲ့ ပုံရိပ်ဟာ အထင်ရှားဆုံး ပြယုဂ် တခု ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ၂၀၀၇-ခုနှစ်မှာတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းတော်တွေဟာ မြန်မာပြည်မှာ ထင်ရှားတဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားထကြွမှုတခုကို ဦးဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ သပိတ်တွေ လွယ်ထားတဲ့ သံဃာတန်းကြီးများစွာဟာ စစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြရင်း ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်နေတဲ့ ပုံရိပ်တွေအပေါ် (သူတို့ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့ စစ်သားတွေဆီက မရခဲ့ရင်တောင်မှ) တကမ္ဘာလုံးက ကရုဏာသက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူမှုရေးလှုပ်ရှားတက်ကြွမှုတွေ ဘယ်နေရာမှာ အဆုံးသတ်ပြီး နိုင်ငံရေးစစ်သွေးကြွမှုတွေ ဘယ်နေရာက စပါသလဲ။ ဘာသာတိုင်းဟာ အတွေးအခေါ် အယူအဆတွေကြောင့် အဆိပ်ခတ်ခံရပြီး အဖျက်အင်အားစု အဖြစ် မူလအုတ်မြစ်နဲ့ ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီး ဆန့်ကျင် ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ အခုတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အလှည့်ကျလာပါပြီ။
ဘေးက နံရံပေါ်မှာ သူ့ရဲ့ ကိုယ်လုံးပြည့်ပကတိလူအရွယ်ပုံကြီးက ဖုံးလွှမ်းလို့ မန္တလေး မစိုးရိမ်တိုက်သစ်ရဲ့ စင်မြင့်ပေါ်မှာ တင်ပလ္လင်ခွေထိုင်နေတဲ့ ဦးဝီရသူက သူ့ရဲ့ ကမ္ဘာ့အမြင်ကို အသေးစိတ် ရှင်းလင်းဟောကြားပါတယ်။ အမေရိကန် သမ္မတ ဘားရက်အိုဘားမားဟာ “လူမည်း မူဆလင်သွေး ရောနှော စွန်းထင်နေသူ” ဖြစ်တယ်။ သူ့နာမည်ကို အာရပ် အကြမ်းဖက် သမားတယောက်ရဲ့ နာမည်နဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ခေါ်ဝေါ်နေတာကို အရွဲ့တိုက်တယ်လို့ မမြင်ပေမဲ့ အာရပ်တွေဟာ ကုလသမဂ္ဂကို အပိုင်စီးထားကြပြီဖြစ်ကြောင်း သူယုံကြည်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်က မူဆလင် ၉၀% လောက်ဟာ “အစွန်းရောက် လူဆိုး” တွေလို့ ၂၀၀၃-ခုနှစ်မှာ မူဆလင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုကြောင့် ထောင်ဒဏ် ခုနစ်နှစ် ကျခံခဲ့ရသူ ဦးဝီရသူက ပြောပါတယ်။ အခုအခါ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ ဂုဏ်တော်တရားများစွာကို ကိုယ်စားပြုထားတဲ့ ဂဏန်းဖြစ်တဲ့ ၉၆၉-လို့ ခေါ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို ကိုယ့်အချင်းချင်းသာ ဆက်ဆံကြဖို့ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတရပ်ကို သူဟာ ဦးဆောင်နေပြန်ပါတယ်။ “ကိုယ့်အမျိုးဘာသာကို စောင့်ရှောက်ဖို့က ဒီမိုကရေစီထက် ပိုအရေးကြီးတယ်” လို့ ဦးဝီရသူက မိန့်ပါတယ်။ အခြေခံလမ်းစဉ် အနည်းအကျဉ်းလောက်နဲ့ သူ့တယူသန်အမြင်အပေါ်ဖက်တွယ်ပြီး (လောကီ) ပညာ မတတ်တဲ့ စည်းအပြင်ကလူ အဖြစ်၊ မိဘတွေက ကျွေးဖို့ ပါးစပ်တပေါက်လျော့သွားရင် တော်ပြီဆိုပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ သွားထားတာ ခံခဲ့ရတဲ့ ကလေးရှစ်ယောက်ထဲက တယောက်အဖြစ် ဦးဝီရသူကို အရေးမစိုက်ဘဲ ပစ်ပယ်လိုက်ဖို့ လွယ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ဦးဝီရသူဟာ ဆွဲဆောင်မှုအားကောင်းပြီး သြဇာပြည့်ဝသူဖြစ်တဲ့အပြင် သူ့ရဲ့အမြင်၊ စကားတွေ ဟာ ပဲ့တင်ထပ်သွားပါတယ်။ နိုင်ငံမှာ လူများစုဖြစ်တဲ့ ဗမာလူမျိုးစုအတွင်းနဲ့ အာရှရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအကြားမှာပါ အစ္စလာမ်ဘာသာဟာ တချိန်က ဗုဒ္ဓဘာသာမြေတွေ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှား၊ ပါကစ္စတန်၊ အာဖဂန်နစ္စတန်တွေကို အောင်မြင်လွှမ်းမိုးပြီး ဖြစ်နေတာကြောင့် သူတို့ရဲ့ ဘာသာဟာ စီးနင်းသိမ်းပိုက်ခံနေရတယ်၊ အစကဒ်ပြားလဲသွားရင် ကျန်တာအကုန် ပြိုဆင်းသွားနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ ဝိုးတဝါးအာရုံသိ ရှိနေကြပါတယ်။ သက်သေသာဓက မရှိဘဲတောင်မှ ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသားရေးဝါဒီတွေက ပြည်တွင်းမူဆလင်လူဦးရေဟာ သူတို့တွေထက် ပိုပြီး မြန်မြန်ဆန်ဆန် တိုးပွား နေတယ်လို့ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြပြီး
အရှေ့အလယ်ပိုင်းက ငွေကြေးတွေဟာ ဗလီအသစ်တွေ ဆောက်ဖို့ သွန်ချနေတာ ကိုလည်း စိုးရွံ့နေကြပါတယ်။ ၂၀၁၁-ခုနှစ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံဟာ စစ်အစိုးရက အရပ်သားတပိုင်း အစိုးရကို လမ်းဖွင့်ပေးပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ စတင်လာကတည်းက စစ်တပ်ကို သူတို့ရဲ့ ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်ခဲ့မှုတွေအတွက် တာဝန်ခံဖို့ စည်းရုံးဆော်သြခဲ့တာဟာ လူနည်းနည်းပဲ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို အေးချမ်းတည်ငြိမ် သည်းခံ တတ်တဲ့ စိတ်မျိုးဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ ခွင့်လွှတ်တတ်ခြင်းတရားနဲ့ ပြည့်ဝတဲ့စိတ်ဓာတ်ကို ထင်ဟပ်ပေါ်လွင်စေခဲ့ ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း မြန်မာပြည်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်မှုဟာ လူမျိုးတုန်းသုတ်သင်ရှင်းလင်းရေးကို နှီးနွယ်နေတဲ့ အယူအဆများနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အစွန်းရောက်တို့ရဲ့ အသံတွေကိုလည်း ဖြေလွှတ်လို့ တိုးပွားလာအောင် လမ်းဖွင့်ပေး ခဲ့ရပါတယ်။ ပြဿနာတွေက အချိုးအစားမညီမျှတဲ့ ဒေသခံဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့ မူဆလင်တွေအကြား ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားပြီး မူဆလင်အများအပြား အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့ အနောက်ဖျားဒေသတွေမှာ မနှစ်က စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဓားလွတ်တွေ ကိုင်ဆွဲထားတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ လူအုပ်ကြီးတွေက ရိုဟင်ဂျာကျေးရွာတွေကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီး လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ အဆိုအရ ဇနပုဒ်တခုက တနေကုန်တနေခမ်း ကြာမြင့်အောင် အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ် သုတ်သင်မှု တခုမှာ မူဆလင် ၇၀-ခန့် အသတ်ခံခဲ့ကြရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အစိုးရက စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု အနည်းငယ်သာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဒီလို လူမျိုးစုခြင်း အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာ အဲဒီကတည်းကစပြီး နိုင်ငံရဲ့ တခြားဒေသတွေကို ပျံ့နှံ့ကူးစက် ဝင်ရောက်သွားပါတော့တယ်။ မတ်လမှာ ဒါဇင်ပေါင်းများစွာ အသတ်ခံခဲ့ရပြီး ဗလီတွေ အိမ်တွေ မီးရှို့ခံရတာကြောင့် သောင်းပေါင်းများစွာသော လူတွေဟာ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ကလေးတွေဟာ အပိုင်းပိုင်း ခုတ်ထစ် သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပြီး အမျိုးသမီးတွေဟာ မီးရှို့သတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဖြစ်ရပ်အများအပြားမှာ ရဟန်းတွေဟာ သွေးရူးသွေးတမ်း ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရ ဖြစ်နေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို လှုံ့ဆော်နေတာ တွေ့မြင်ရပါတယ်။ မတ်လနှောင်းပိုင်းမှာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အချက်အခြာဖြစ်တဲ့ မိတ္ထီလာမြို့ဟာ နေ့ပေါင်းများစွာ မီးလောင်နေပြီး မူဆလင်တွေက ရဟန်းတပါးကို သတ်ဖြတ်အပြီး မူဆလင်ရပ်ကွက်တခုလုံးဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ လူအုပ်ကြီးက ရှို့တဲ့ မီးတောက်မီးလျှံ တွေ အတိနဲ့ လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ (တရားဝင် သေဆုံးသူအရေအတွက်အရ ဗုဒ္ဓဘာသာ နှစ်ဦးနဲ့ အနည်းဆုံး မူဆလင် ၄၀-လို့ ဆိုပါတယ်။)
မူဆလင် ထောင်ပေါင်း များစွာဟာ သတင်းထောက်တွေကို ဝင်ခွင့်မပေးဘဲ တားမြစ်ထားတဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ ပြည့်သိပ်နေ ပါတယ်။ ဒေသခံ မဒရာဆာကျောင်းက အသတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသား အနည်းဆုံး နှစ်ဆယ်လောက်ထဲက တယောက် ဖြစ်တဲ့ အသက် ၁၅-နှစ်အရွယ် အဗ္ဗဒူလ်ရာဇတ်ရှာဘန်ရဲ့ မိသားစုနဲ့ ကျနော် တွေ့ဆုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ရာဇတ်ရဲ့အသက်ဟာ ခေါင်းကို သံတွေထိုးထိုးထောင်ထောင်နဲ့ သစ်သားပြားကြီးတခုနဲ့ အရိုက်ခံရတဲ့အခါ ချုပ်ငြိမ်းသွားခဲ့ရပါတယ်။ “ကျမရဲ့ သားဟာ မူဆလင်မို့ အသတ်ခံခဲ့ရတာပါ။ တခြားဘာကြောင့်မှ မဟုတ်ပါဘူး” လို့ ရာဇတ်ရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူ ရာဟာမာဘီက မီးလောင်ကျွမ်းသွားတဲ့ ဗလီတခုရဲ့ နောက်ခံအရိပ်အောက်မှာ ကျနော့်ကို ပြောပါတယ်။ ကျောင်းတော်နှင့် နိုင်ငံတော် အစ္စလာမ်ကို မောင်းနှင်ထုတ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ အဓိကလွှမ်းမိုးထားရေးကို အာမခံပေးမယ့် အိပ်မက်တွေဟာ သီရိလင်္ကာရဲ့ အင်အား အတောင့်တင်းဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး အမည်အားဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာအင်အား တပ်မတော် လို့ အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ ဗုဒ္ဓဗလသေန (ဗဗသ) (Bodu Bala Sena – BBS) အဖွဲ့အစည်းကို သက်ဝင်လှုပ်ရှားစေခဲ့ပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာ သီရိလင်္ကာရဲ့ မြို့တော် ကိုလံဘိုရဲ့ ဆင်ခြေဖုန်းတနေရာမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ရဲ့ နှစ်ပတ်လည် ညီလာခံမှာ ရဟန်းတော် အပါး ၁၀၀-ကျော်က ချီတက်မှုကို ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး နောက်လိုက်နောက်ပါ များက ဗုဒ္ဓသာသနာ့ အလံတွေကို ကိုင်စွဲရင်း သူတို့ရဲ့ ညာဘက်လက်ကို ရင်ဘတ်ပေါ်ယှက်တင်ရင်း သူတို့ရဲ့ ဘာသာတရားကို ကာကွယ်ဖို့ ကတိသစ္စာပြုခဲ့ကြပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ တနှစ်ကမှ ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ ဗဗသအဖွဲ့က ကမ္ဘာ့ ရှေးအကျဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံအဖြစ် ဆက်တိုက်တည်ရှိခဲ့တဲ့ သီရိလင်္ကာဟာ သူ့ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ရင်းမြစ်တွေကို အခိုင်အမာ ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ဖို့ လိုအပ်နေပြီ လို့ အထူးတလည် တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့က အစိုးရကျောင်းတွေမှာ ရဟန်းတော်တွေ သမိုင်းကို သင်ကြား ပေးစေလိုပြီး နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ ၉%ဟာ မူဆလင်တွေ ဖြစ်နေလင့်ကစား ဘာသာရေးအရ ခေါင်းမြီးခြုံမှုတွေ ပိတ်ပင်တားမြစ် ပေးစေလိုနေပါတယ်။ ဗဗသ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးနဲ့ ရဟန်းတော်တပါးဖြစ်သူ ဂါလဗုဒ္ဓ အတ္တတိ ဂန္ဓသာရ ထေရ က အဖွဲ့ကြီးရဲ့ နှစ်ပတ်လည် ညီလာခံမှာ “ဒါဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အစိုးရဖြစ်တယ်။ ဒါဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ တိုင်းပြည်ဖြစ်တယ်” လို့ မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ဗဗသက ရဟန်းတွေလိုပဲ သဘောထားတင်းမာတဲ့ ရဟန်းတော်တွေဟာ အထူးသဖြင့် ဟိန္ဒူ လွတ်မြောက်ရေး တမီလ်အီလမ်ကျားသူပုန်တွေနဲ့ ၂၆-နှစ်ကြာ စစ်ပွဲ လွန်ခဲ့တဲ့ လေးနှစ်တုန်းက အဆုံးသတ်သွား ကတည်းက လူနည်းစု ခရစ်ယာန်နဲ့ မူဆလင်တွေဘက် လှည့်လာကြပါတယ်။ ရှေးရိုးစွဲဝါဒီ သမ္မတ မဟိန္ဒာရာဇပဿ ၂၀၀၅-ခုနှစ်မှာ ရွေးခြယ်ခံရပြီးနောက်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ လွှမ်းမိုးရေးဝါဒီ အုပ်စုတွေဟာ သြဇာအာဏာ ပိုရှိလာကြပါတယ်။ မကြာသေးခင်လများက သူတို့ရဲ့ ခြိမ်းခြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ မူဆလင်ပိုင် အထည်ဆိုင်တဆိုင်၊ ခရစ်ယာန် သင်းအုပ်ဆရာအိမ်တအိမ်နဲ့ မူဆလင်တို့နဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ သားသတ်ရုံတရုံကို တိုက်ခိုက်ကြတာတွေ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို လှည့်လည်သောင်းကျန်းနေကြတဲ့ လူတွေကို ဦးဆောင်နေတဲ့ ရဟန်းအချို့ကို ဗီဒီယိုပေါ်မှာ ရိုက်ကူးမှတ်တမ်းတင် ထားတာ တွေ့ရပေမဲ့လည်း ဘယ်သူမှ အရေးယူ မခံခဲ့ရပါဘူး။ သီရိလင်္ကာမှာ ရဟန်းတော်တွေ သြဇာလွှမ်းမိုးတဲ့ ပါတီက အစိုးရအဖွဲ့မှာ ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်လာခြင်းနဲ့အတူ ကျောင်းတော်နဲ့ နိုင်ငံတော်ဟာ တကယ့်ကို ပိုမိုနီးစပ်စွာ ကြီးထွားလာပါတော့တယ်။ မတ်လမှာ ဗဗသအဖွဲ့က ကြီးမှူးတည်ထောင်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ခေါင်းဆောင်မှုအကယ်ဒမီ ဖွင့်ပွဲ မှာ အထူးဂုဏ်သရေရှိ ဧည့်သည်တော် အဖြစ် တက်ရောက်လာခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ သီရိလင်္ကာ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး နဲ့ သမ္မတရဲ့ ညီဖြစ်သူ ဂေါတဘယ ရာဇပဿဖြစ်ပြီး “ကျနော်တို့တိုင်းပြည်နဲ့ အမျိုးဘာသာကို ကာကွယ်နေတာဟာ ရဟန်းတော်တွေပါပဲ” လို့ မိန့်ကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ဘက်စွန်းမှာတော့ အကူအညီလိုအပ်နေတာက ရဟန်းတော်တွေဖြစ်ပြီး တချို့တွေကတော့ သူတို့ရဲ့ ကြံရာမရဖြစ်မှုကနေ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်နဲ့ ဆန့်ကျင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ခိုတွယ်အားကိုးကြရပါ တော့တယ်။ တောင်ပိုင်း ပြည်နယ်တွေဖြစ်တဲ့ ပတ္တနီ၊ ယာလနဲ့ နရသီဝပ်ပြည်နယ်တွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ရာစုနှစ် အစောပိုင်း ကာလတွေမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း သက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံက ဒီဒေသကို မသိမ်းပိုက်မီအထိ မလေး ဆူလတန်စော်ဘွား နယ်မြေရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတခုအဖြစ် တည်ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီဒေသ လူဦးရေရဲ့ အနည်းဆုံး ၈၀% လောက်ဟာ မူဆလင်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခွဲထွက်ရေးသောင်းကျန်းမှု အရှိန်ကောင်းလာတဲ့ ၂၀၀၄-ခုနှစ် ကတည်းက စလို့ ကျောင်းဆရာတွေ၊ စစ်သားတွေ၊ အစိုးရဝန်ထမ်းတွေ အစရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အများအပြားဟာ ထိုင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ သူတို့ရဲ့ ရာထူးတွေအရ ပစ်မှတ်ထား ခံခဲ့ကြရပါတယ်။ ရဟန်းတော် ဒါဇင်ပေါင်း များစွာ ဟာလည်း အတိုက်အခိုက် ခံခဲ့ကြရပါတယ်။ အခုအခါ ထိုင်းစစ်တပ်နဲ့ တခြားလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာ ဝတ်ကျောင်းတော်တွေလို့ သိကြတဲ့ ထိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းတွေထဲကို ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်ပြီး ရဟန်းတော်တွေ မနက်တိုင်း ဆွမ်းခံကြွကြတဲ့အခါ စစ်သားတွေက အတူလိုက်ပါပေးကြရပါတယ်။ “တခြားနည်းလမ်းမရှိဘူး” လို့ ဗိုလ် ဆဝိုင်းခွန်ဆစ်က ပြောကြားပါတယ်။ “ဗုဒ္ဓဘာသာကို သေနတ်တွေကနေ ထပ်ပြီးခွဲခြားထားလို့ မရတော့ပါဘူး” တဲ့။ ပတ္တနီမြို့ထဲက ဝပ်လပ်မွမ်ကျောင်းတော်မှာ ရဟန်းတော် ဆယ်ပါးနဲ့ စစ်သား ၁၀၀-လောက် ရှိနေပါတယ်။ ပြန့်ကျဲနေတဲ့ ကျောင်းဝင်းထဲမှာမူလစေတီကို ထိုင်းတပ်မတော်ရဲ့ အမှတ်-၂၃ ခြေလျင်တပ်ရင်းအတွက် စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုစခန်းအဖြစ် သိမ်းပိုက်ထားရပြီး ဒီမြင့်မြတ်တဲ့ ဘာသာရေးအဆောက်အဦးရဲ့ အခြေအလယ်ပိုင်းကို ပုံဖျက်ပိုက်ကွန်တွေနဲ့ ဖုံးအုပ်ထား ပါတယ်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ထောင်ပေါင်းများစွာသော ဗုဒ္ဓဘာသာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေကို သူတို့ ကျေးရွာတွေကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ဖို့ရာ လက်နက်တပ်ဆင်ထားတဲ့ ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ထဲ ဝင်ရောက်ဖို့ ဒီကျောင်းမှာ သင်တန်းပေးပါတယ်။ ၁၆-နှစ်တိုင်တိုင် ရဟန်းဝတ်ခဲ့ပြီး အခု ကျောင်းတော်ကို စောင့်ရှောက်နေတဲ့ ဖရာ့ပလဒ်ဆုသီဖောင်း ပူရတ်ဆာရိုက သူ သင်္ကန်းကို ရုံထားတုန်းမှာပဲ ပစ္စတို သုံးလက် ပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံပါတယ်။ “ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက် အနေနဲ့တော့ နည်းနည်း အပြစ်မကင်းသလိုမျိုး ခံစားကောင်း ခံစားရမှာပေါ့” လို့ ပြောပါတယ်။ “ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကာကွယ်ရမယ်လေ” တဲ့။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ သူတို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေထဲမှာ စစ်သားတွေရှိနေ တာကြောင့် ပိုပြီး အကာအကွယ်ရတယ်လို့ ခံစားရရင်တော့ မူဆလင်တွေအတွက် ဒါဟာ တခြားတခုကို အချက်ပေးလိုက် သလိုပါပဲ။ “ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေထဲ စစ်သားတွေကို ဖိတ်ခေါ်ထားခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံတော်ဟာ ဘာသာရေးကို စစ်ရေးနဲ့ ထိမ်းမြားမင်္ဂလာပြုလိုက်တာပဲ” လို့ အိုဟိုင်းယိုးမှာရှိတဲ့ ယန်းစတောင်းပြည်နယ်တက္ကသိုလ်က ဘာသာရေးလေ့လာမှု ဆိုင်ရာ လက်ထောက်ပါမောက္ခ နဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း ပဋိပက္ခတွေမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အခန်းကဏ္ဍအကြောင်း စာအုပ် တအုပ် ရေးသားခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာတဦး ဖြစ်သူ မိုက်ကယ်ဂျယ်ရီဆန်က ဆိုပါတယ်။ “ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ ကျမတို့ကို ထိုင်းလူမျိုးတွေအဖြစ် ဘယ်တုန်းကမှ မယူဆခဲ့ဘူး” လို့ အခြား လူ ၁၅-ယောက်နဲ့အတူ ဖေဖော်ဝါရီလမှာ ထိုင်းရေတပ်အခြေစိုက်စခန်းတခုကို ဝင်စီးနင်းဖို့ ကြိုးပမ်းမှုအပြီး ထိုင်း မရင်းတပ်သားတွေက သတ်ပစ်တာ ခံလိုက်ရတဲ့ သောင်းကျန်းသူလို့ သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိတဲ့သူတယောက်ရဲ့မိခင် ဆူမိုမာခေးက ပြောပြန်ပါတယ်။ “ဒါဟာ ကျမတို့မြေပေမဲ့ ကျမတို့က အပြင်လူတွေပါ” လို့ ဆက်လက် ပြောကြားပါတယ်။ ဒါတွေ အားလုံးအပြီးမှာတော့ မူဆလင်တွေဟာလည်း တောင်ဘက်စွန်းမှာ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စွာနဲ့ ပြေးလွှားနေကြရတာပါပဲ။ အကြမ်းဖက်မှုတွေမှာ သေဆုံးကြရတဲ့ အများစုကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေထက် ပိုများပြီး ဘယ်သူဘယ်ဝါရယ် မခွဲခြားတဲ့ ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှုတွေ ဒါမှမဟုတ် သူတို့ ဟာ နိုင်ငံတော်နဲ့ တနည်းတဖုံးဆက်စပ်နေတယ် ဆိုတာတွေမှာ အသက်ပေးသွားကြရတာပါပဲ (လူဦးရေ အချိုးအစား အလိုက် ကြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ သေကြရတာက ပိုများပါတယ်)။
ဒါနဲ့တောင် ဘုန်းကြီး တပါးပြိးတပါးက မူဆလင်တွေဟာ ဗလီတွေကို လက်နက်တွေ သိုလှောင်ဖို့ အသုံးချနေတာ၊ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း အီမန် (အစ္စလာမ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်) တိုင်းက သေနတ်တွေ ကိုင်ထားကြတာဆိုပြီး ကျနော့်ကို ပြောကြပါတယ်။ “အစ္စလာမ်ဟာ အကြမ်းဖက်တဲ့ ဘာသာပဲ” လို့ မရင်းတပ်သားတဖြစ်လဲ ဘုန်းကြီး ဖရာ့တုံဂျီရတမို က ဆိုပါတယ်။ “ဒါကို အားလုံးသိကြပါတယ်”။ ဒါကတော့ ဗမာဘင်လာဒင်က ထောက်ခံပေးမယ့် သဘောထားပါပဲ။ ဦးဝီရသူ ဟာ သူ့ဘာသာတရားရဲ့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ သုတ္တန်တရားတော်တွေနဲ့ သူ့ရဲ့ ဗမာအများစုဖြစ်တဲ့ အမိမြေတလျှောက် ပျံ့နှံ့ နေတဲ့ မူဆလင်ဆန့်ကျင်ရေး အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ဘယ်လိုများ ဆက်စပ်ယူမှာပါလိမ့်။ “ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ကျုပ်တို့ကို တိုက်စစ်ဆင်ခွင့် ပြုမထားပါဘူး” လို့ သူက ကျနော့်ကို မိန့်ကြားပါတယ်။ “ဒါပေမဲ့ ကျုပ်တို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ကာကွယ်ဖို့တော့ ကျုပ်တို့မှာ အခွင့်အရေးအပြည့်ရှိတယ်” လို့ ဆက်မိန့်ကြားပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ ညနေပိုင်း တရားနာပရိဿတ်ကို သူတရားဟောဖို့သွားတဲ့အခါမှာ ပြုံးရွှင်နေတဲ့ အိမ်ရှင်မတွေ၊ ကျောင်းသားတွေ၊ ဆရာတွေ၊ အဖွားအိုတွေနဲ့ တခြားသူတွေကို သူ့နောက်က လိုက်ဆိုစေဖို့ သူလှုံ့ဆော်နေတာကို နားထောင်နေမိပါတယ် … “ဗမာ လူမျိုးအတွက် မိမိကိုယ်ကို စွန့်လွှတ်ပါ၏” တဲ့။
ဒါနဲ့တောင်မှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ ခွင့်လွှတ်သည်းခံခြင်းတရားဟာ ဒေသ မရွေး တည်ရှိနေပါသေးတယ်။ ၂၀၁၁-ခုနှစ် ဗုံးတလုံးပေါက်ကွဲစဉ်မှာ ဝပ်လပ်မွမ်ကျောင်းတော်က ဘုန်းတော်ကြီးတပါး ဖြစ်တဲ့ ဝပ်ချရာပေါင်ဆွတ်သ ဟာ စစ်သားတွေ စောင့်ရှောက်လိုက်ပါပေးရင်း နံနက်ပိုင်း ဆွမ်းခံကြွနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ ခန္ဓာကိုယ် အောက်ပိုင်းတပိုင်းလုံး ဗုံးဆံအစအနတွေက ရတဲ့ အမာရွတ်တွေနဲ့ ပြည့်နှက်ဖုံးလွှမ်းနေပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ အသက် ၂၉-နှစ်အရွယ်ရှိပြီး လူဝတ်လဲထားတဲ့ ဝပ်ချရာပေါင်ဟာ သွေးလန့်နေဆဲဖြစ်ပြီး ကဏှာမငြိမ်တဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တခုလုံးကလည်း ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်နဲ့ အကြောဆွဲနေရှာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူက သူ့ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ ဘာသာတရား တခုလုံးကို အပြစ်မတင်ရှာပါဘူး။ “အစ္စလာမ်ဘာသာဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာလို၊ တခြားဘာသာ အားလုံးလိုပဲ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ဘာသာတခုပါ” လို့ သူက ဆိုပါတယ်။ “ကျုပ်တို့က မူဆလင်တွေကို အပြစ်တင်နေရင် သူတို့ကလည်း ကျုပ်တို့ကို အပြစ်ပြန်တင်မှာပါပဲ။ ဒါနဲ့ပဲ ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေဟာ ဘယ်တော့မှ ဆုံးတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး”
Cover Credit: PHOTOGRAPH BY ADAM DEAN / PANOS FOR TIME အောက်ပါ link များတွင်လည်း သွားရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
ဦးကိုမိုက် လိတ်စာ တစ်စိတ်လောက်ပြောပါ..
သမ္မတ ရုံးကို သဒင်းပေမို့ဟဲဟဲ. ရဂါး.နောက်ဒါ..